Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0312 lar
Alarobia 17 Okt.
Anisan’ireo olana lehibe maromaro misakana an’ireo izay mandray ny fitantaran’ny Baiboly ny famoronana ho fivoarana miandalana ny Fahalavoan’ny taranak’olombelona. Voalazan’ny Baiboly mantsy fa lavorary izao tontolo izao sy ny olombelona tamin’ny vao namoronana azy. Hatrany ifotony io fampianarana io dia efa manohitra sahady ny foto-kevitry ny fivoarana miandalana. Tsy niditra teto amin’izao tontolo izao ny fahoriana sy ny fahafatesana raha tsy tamin’ny alalan’ny fandikan-dalàna irery ihany. Foto-kevitra mifanipaka amin’ny an’ny fivoarana miandalana izany, izay milaza fa anisan’ireo fitaovana nandavorary ny famoronana mihitsy aza ny fahoriana sy ny fahafatesana.
Alao sary an-tsaina izay mety hambaran’izany mikasika ny toetran’Andriamanitra raha toa ka noforoniny araka izany fampianaran’ny fivoarana miandalana izany isika. Nampiasain’Andriamanitra ve izany ny herisetra sy ny fitiavan-tena ary ny didin’ny be sandry mba hamoronana zava-manana aina tsy misy fitiavan-tena na kilema ara-pitondran-tena, kanefa dia “lavo” indray ka tonga amin’ny fanaovana herisetra sy fitiavan-tena ary fanaovana kely tsy mba mamindro? Io toerana io anefa no tsy maintsy nanavotana azy raha tsy izany dia hiharan’ny famaizana farany izy.
Eritrereto ihany koa ny fiantraikan’ny foto-kevitra momba ny fivoarana miandalana eo amin’ny drafi-panavotana. Tonga nofo tao amin’ny rajako nihanivoatra ho olombelona tokoa ve ny Tompo, ary izany rajako izany dia voaforona tao anatin’ny lalàn’ny fahaveloman’izay kasinga matanjaka indrindra ao anatin’ny zava-manana aina? Miseho nandritra io fiforonana io koa amin’izany ny fifamonoana feno herisetra sy fangirifiriana kanefa ny tanjona dia ny hanafoana ny fahafatesana, “ilay fahavalo farany” (1 Kôr. 15:26). Amin’ny fomba ahoana anefa no hahatonga ny fahafatesana ho “fahavalo” raha toa ka anisan’ireo fitaovana nofidin’Andriamanitra hamoronana ny olombelona izy? Tsy maintsy nandany fatina homo erectus, homo heidelbergensis, ary homo neanderthalensis (karazana rajako nivoatra tsikelikely ho olombelona) izany Andriamanitra vao nahazo zavaboary anankiray mitovy endrika Aminy (izany hoe ny homo sapiens)? Ny hanavotra ny taranak’olombelona amin’ny fomba nentin’Andriamanitra namoronana azy izany no nahatongavan’i Jesôsy? Feno hadalana sady tsy ara-Baiboly velively izany foto-kevitra rehetra izany.
Vakio ny Rôm. 5:12-19 sy ny Kôl. 3:10. Ahoana no hanampian’ireo andininy ireo antsika hahatakatra ny nataon’ny ota tamin’ny taranak’olombelona? Ahoana no fisehon’ny ady lehibe ifanaovan’ny ratsy sy ny tsara eo amin’izany sary iray manontolo izany? Jereo ny 1 Jao. 3:8.
Efa vokasiky ny ota avokoa ny lafiny rehetra amin’ny fiainan’ny olombelona, eny, fa na dia ny an’ny tany aza. Resahin’i Ellen White ireo ozona telo nihatra tamin’izao tontolo izao. Ny voalohany avy tamin’ny fahalavoan’i Adama, ny faharoa avy tamin’ny namonoan’i Kaina an’i Abela ary ny fahatelo, dia ny loza nateraky ny Safo-drano. Miresaka ny amin’ny “fitontonganana tanteraka” ny teôlôjianina, izany hoe nosimbain’ny ota ny lafiny rehetra mahakasika ny taranak’olombelona, ny fiainany ary ny maha-izy azy. Raha mijery ny tontolo manodidina isika, eny, ny tenantsika mihitsy aza, dia sarotra ve ny mahita izany, sa ahoana?
Inoan’ny olona sasany fa ny herisetra sy ny fahoriana ary ny fahafatesana dia samy tafiditra avokoa ao anatin’ny fomba namoronan’Andriamanitra ny taranak’olombelona. Ao kosa ny mihevitra fa ny herisetra sy ny fahoriana ary ny fahafatesana dia samy anisan’ny fomba ampiasain’i Satana hamotehana ny taranak’olombelona izay noforonin’ Andriamanitra. Eritrereto ny amin’ireo fahasamihafan’ny toetran’Andriamanitra izay asehon’ireo fomba fijery mifanohitra ireo.